XYZPrinting 3D scanner famerenana | Fitaovana maimaim-poana
Fanadihadiana scanner an'ny scanner XYZPrinting 3D
Rehefa mandinika ny famoronana zavatra 3D izahay, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao ho an'ny mpampiasa maro dia ny fahafahany manadihady ireo zava-misy ao amin'ny Real World mba anaovana nomerika azy ireo ary afaka manatanteraka fanavotana sy fanovana amin'ny tontolo dizitaly. Efa ela ny vahaolana samihafa no teny an-tsena mba ahafahana manao nomerika ny tena izy.
Ity indray mitoraka ity handeha hamakafaka ireo fitaovana nomen'ny mpanamboatra XYZPrinting izahay. Un scanner 3D tanana, mora ampiasaina ary afaka mitondra izahay na aiza na aiza.
2 Lafiny ara-teknika sy manokana ny scanner XYZPrinting 3D
4 Rafitra miasa, fepetra takiana ary fifandraisana
5 Fametrahana sy fanirahana
6 Kalitaon'ny scan azo
Sarotra ny mametraka fampitahana ny vokatra satria vitsy dia vitsy ny mpanamboatra sahy mivarotra fitaovana iray misy an'io fahasarotana sy toetra io ao anatin'ny tontolo anatiny sy semi-matihanina. Amin'ireo fitaovana nampidirinay tamin'ny fampitahana, ny 2 amin'izy ireo dia natao hizaha ireo zavatra tavela eo amin'ny lampihazo mihodina. Ary koa ny scanner BQ (izay efa nodinihintsika teo aloha) efa najanona.
Ny vidin'ny scanner XYZPrinting 3D dia mametraka azy ho vokatra mora indrindra amin'ny fampitahana. Manaraka izany, hojerentsika raha mifanaraka amin'ny teknika ny fanantenana naterak'izany ho antsika.
Lafiny ara-teknika sy manokana ny scanner XYZPrinting 3D
Ity scanner tanana ity dia mifototra amin'ny teknolojia Intel RealSense, ity teknolojia ity amin'ny ankapobeny manambatra fakantsary infrared hisamborana ny halalin'ireo zavatra notarafina sy fakan-tsary HD handraisana ireo firafitra. Raha ny tena izy dia sarotra kokoa ny fizotrany satria ny fitaovana mihitsy no tompon'andraikitra amin'ny famoahana andry infrared izay avy eo mandika ny fihemorana azon'ny fakantsary infrared ary manambatra sy manitsy ny angona azo tamin'ny alàlan'ny algorithm izay mampiasa ny angona avy amin'izany. fakan-tsary sy fakan-tsary HD.
Ity teknolojia ity dia manana fampiharana tsy manam-petra ary XYZPrinting dia nampihatra izany tamin'ny famoronana fitaovana kely nampiditra ny maodely fakantsary Intel F200. ATSINANANA fitaovana tsara niaraka taminy a tena mora ampiasaina rindrambaiko izany dia hahafahantsika mahazo zavatra dizitaly haingana be dia be amin'ireo izay notarafina tamin'ny tontolo tena izy.
Ny mpanamboatra dia namorona scanner miaraka a famolavolana tena manintona. Izy io dia mampifangaro ny mena manaitra miaraka amin'ny volondavenona manjavozavo amin'ny endrika mirindra sy ergonomika azontsika tazonina sy miasa amin'ny tanana iray monja. Ny vatan'ny scanner dia mampiditra bokotra iray hahafahantsika manomboka sy mampiato ny fizotran'ny fizahana.
Natao ireo pitsopitsony ireo mba afaka miasa amin'ny tanana iray isika, mamela antsika etsy ankilany malalaka hampiasa ny PC ary hanao safidy sasantsasany toy ny fitehirizana ny volavolantsika sy ny famerenana ny scan raha tsy afa-po loatra isika amin'ny valiny.
Ilay scanner mifandray amin'ny PC amin'ny alàlan'ny tariby eo ho eo Metatra 2. Raha hizaha scan amin'ny alàlan'ny solosaina PC ianao dia afaka mandeha mitady fanitarana satria azo antoka fa somary latsaka kely ihany indraindray.
Miaraka amin'ny habetsahan'ny scan oscillating eo anelanelan'ny 100x100x200 cm sy 5x5x5 cm tsy manam-petra ny fahafaha-manao ary afaka mivezivezy avy amin'ny zavatra madinidinika isika ka hatramin'ny zavakanto kanto.
La famaritana lalina eo anelanelan'ny 1 sy 2,5 mm Manome toky antsika izy fa ireo zavatra niomerika dia tsy hivadika amin'ny tany am-boalohany, fa angamba io famaritana io dia tsy mety amin'ny sehatra miasa miaraka amin'ny tontolon'ny asa izay refesina amin'ny microns na amin'ny millimeter aza. Mba hanana vokatra tsara ny scanner dia tokony ho eo anelanelan'ny 10 sy 70 cm avy amin'ny maodely ho scanner, tsy maintsy jerentsika izany rehefa manara-maso zavatra marobe ary koa manana halavirana tariby USB misy afaka mifindra manodidina ilay zavatra.
Rafitra miasa, fepetra takiana ary fifandraisana
Gaga izahay tamin'ny fitakiana ny loharanon-karena faran'izay kely indrindra ilainay mba hampiasa ny fitaovana. Raha izahay dia tsy afaka nampiasa an'ity scanner ity tamin'ny solosaina novidiana tao amin'ny birao 3 taona lasa izay tsy maintsy nahita ekipa izahay ny vaovao mampiditra seranana USB 3.0.
Araka ny filazan'ny mpanamboatra azy, ny masontsivana atoro anao dia:
Processeur: Generation faha-5 Intel® Core ™ i4 na taty aoriana
8 GB an'ny RAM
NVIDIA GeForce GTX 750 ti na tsara kokoa miaraka amin'ny RAM 2GB
ihany Ny fomba tsotra indrindra hijerena raha manana solosaina afaka mihazakazaka ny scanner isika dia ny mihazakazaka ny rindrambaiko (tsy maintsy misoratra anarana ianao mba hisintonana azy) fa ny mpanamboatra manome ho an'ny rehetra.
Fametrahana sy fanirahana
Ao amin'ny atin'ny vokatra karatra SD no atolotra miaraka amin'ilay rindrambaiko izay tsy maintsy apetrantsika. Na izany aza, mamporisika anao izahay handefa ny kinova farany azo alaina ao amin'ny tranonkalan'ny mpanamboatra. Satria tato ho ato dia nampidirina ny safidy hahafahana manadihady zavatra tena lehibe.
Tsotra be ny fizotry ny fametrahana, mandrosoa, ekeko…. afaka nametraka tsy nisy olan'ny mpamily izahay ary tsy mila manitsy ireo safidy tsy fahita firy.
Vantany vao nanomboka ny rindrambaiko sambany izahay gaga amin'ny fahatsapana ny fahatsorany amin'izany. Tena intuitive ary na dia ny zaza aza dia afaka manompo azy tsy misy fahasarotana, tsindrio 3 ary manana ny zavatra notarafinay voalohany izahay.
Kalitaon'ny scan azo
Es tena mora ny maka scan tsara satria amin'ny rindrambaiko amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny manamarina ny satan'ny fizotry ny fizahana ary manitsy azy amin'ny fotoana tena izy raha misy lesoka nataonao. Na dia marina aza hoe aiza ny vokatra tsara indrindra azontsika dia ny fitiliana zavatra lehibe kokoa noho ny kapoaka, ho an'ny refy kely dia sarotra ny mandika ny angona.
Ireto misy ohatra vitsivitsy namboarinay. Manomboka amin'ny lohan'ny namana ka hatramin'ny andriamby frizidera roa, na ny kaktus ao anaty vilaninao aza.
Ho toy ny tolo-kevitra ankapobeny dia holazainay aminao izany tsy maintsy afindrainao tsikelikely ilay scanner hanome fotoana ny lozisialy handrindrana ny fampahalalana rehetra izay raisiny sy izay ilay zavatra hojerena tokony ho tena tsara jiro.
Iray amin'ireo teboka miavaka indrindra ananan'ity ekipa ity ny Sarany lehibe amin'ny vidiny. Izahay dia tsy hahita vokatra eny an-tsena izay mampifangaro ity haitao ity amin'ny vidiny tsara toa ny ekipa XYZPrinting.
Raha ampiana an'io zava-misy io ny asa tsara efa nataon'ny mpanamboatra rehefa namolavola ny vokatra sy ny fahombiazan'ny fiarahana amin'ny fitaovana miaraka amina rindrambaiko mora ampiasaina Hofaranana fa ity dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra eny an-tsena hidirana amin'ny scanner 3D amin'ny vidiny ara-toekarena.
Sarany lehibe amin'ny vidiny
Volavola tsotra sy miasa
Mora ampiasaina rindrambaiko
Tariby USB fohy
Fepetra avo lenta
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Fanadihadiana scanner an'ny scanner XYZPrinting 3D
Nahazo drôna niaraka tamin'ny basy submachine i Isiraely noho ny ady tany amin'ireo tanàna
Izy ireo dia mahavita manamboatra foam graphene noho ny fanontana 3D